Home News Xisaabiyaha Baarlamaanka iyo Mid ka mid ah shaqaallaha Golaha shacabka oo...
Xisaabiyaha Baarlamaanka iyo Mid ka mid ah shaqaallaha Golaha shacabka oo Muqdisho lagu weeraray!!
Wararka nagasoo gaaraya Wadada makka-al-mukarama ayaa waxaa ay sheegayaan in lagu rasaaaseeyey xubno ka tirsan.
Baarlamaanka waxaana la ogeyn dhaawaca gaaray inta ay la egyihiin xisaabiyhii BFS iyo shaqsi lagu sheegay isagana in uu ka tirsanaa shaqaalaha baarlamaanka federaalka.
weerarka ayaa loogu geystay gaari waxaana baxsaday kooxahii falkaasi ka masuulka ahaa.
Sida ay goobjoogayaaal noo xaqiijiyeeen weerarka Ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee KUWAIT PLAZA HOTEL dhinaca degmada waaberi.
Ciidamada dowlada soomaaliya ayaaa ku fashilan wax ka qabashada Amiga waxaana dharaar cad ka dhacaya weeraro toos ah